Kiiska dilka Gud Hodon oo soo laba-kacleeyay | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - saddex bilood kadib, waxaa dib usoo rogaal-celiyay kiiska dilka gudoomiyihii degmada Hodon C/xakiin Dhega-juun, oo Ciidanka dowladda ay ku dileen Muqdisho.
Odayaasha Beesha uu ka dhashay H/Gidir Ceyr ayaa sheegay in ay la kulmeen Farmaajo iyo Rooble dhowr jeer islamarkaana ay ka dalbadeen inuu cadaalad helo mas'uulka dowladda u adeegayay ee sida fudud loo dilay balse aan kasoo bixin dalabkooda wax natiijo ah, sida ay Keydmedia Online shaacisay Jimcadii shalay.
Waxay sheegeen in gudoomiye C/xakiin uu cadaalad waayay kadib markii lasii daayay taliyeyaashii u xirnaa dilkiisa oo shaqada dib loogu celiyay, taasoo muujinaysa in wax cadaalad ah dalka ka jirin, gaar ahaan dowladda.
Dilka waxaa u xirnaa taliyeyaasha booliska Howlwadaag Shuceyb Cabdi iyo Waaberi Maxamed C/qaadir, kuwaasoo lala xiray 7 askari oo kale, balse aan lasoo taagin wax maxkamad ah illaa hadda, waxayna ku laabteen shaqadooda.
Beesha C/xakiin Dhegajuun ayaa sheegtay inay shir gaar ah ka yeelan doonto kiiska, islamarkaana ay soo saari doonto go'aanno ay cadaaladda ugu raadinayso marxuumka.
Gudigii baarayay dilkan ayaa ka dhigay falkan mid shil ah, waxaana la baabi'iyay gal-dacwadeedkii CID-da yaallay, iyadoo dowladda aan wax magdhaw ah siinin qoyska Mas'uulka Ciidanka ay dileen.
20-kii January 2021 xili habeen ah Gudoomiyaha ayaa lagu dilay Isgooska Jid Mareexaan ee degmada Howl-wadaag , waxaana la sheegay in rasaas ku fureen gaarigii Ciidamo booliis ah oo Isgooskaasi ku sugnaa.
Waxaa jira Mas'uuliyiin badan oo Dhegajuun oo kale Muqdisho loogu dilay, kuwaasoo uu ku jiro Eng Yariisow oo dilkiisa illaa hadda aan jirin cid wax iska waydiisay iyo qof u xiran.